भूकम्पका विते तीन वर्षः बनेनन् अझै १४ सय सम्पदा !
कति सम्पदाको पुनर्निर्मिाण सम्पन्न ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | भूकम्प गएको झण्डै साढे तीन वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । तर, भूकम्पले भत्काएका १४ सय सम्पदा भने अझै पुनःनिर्माण हुन सकेका छैनन् ।
भूकम्पले तहसनहस बनाएका १ हजार ५ सय सम्पदामध्ये अझै १ हजार ४ सय १० सम्पदा निर्माण हुन नसकेर अलपत्र परेका छन् ।
भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ७ सय ५३ ऐतिहासिक, पुरातात्त्वीक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो ।
पुरात्त्व विभागका अनुसार ती सम्पदा बाहेक थप ६ जिल्लाका ८ सय ४५ अन्य जिल्लाबाट रहेका छन् ।
पुरात्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दहालकाअनुसार भूकम्पले ४ सय ९४ को संरक्षण सुरु भएकोमा १ सय ८५ को निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
जसमध्ये १ सय ५० को यही आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विभागले लक्ष्य राखेको छ ।
अगामी २०८० सालसम्म सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने महानिर्देशक दहालले दाबी गरे । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट विभागले सम्पदा पुनर्निर्माण सुरु गरेको थियो ।
यस वर्ष राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ४९ सम्पदा निर्माणको अनुमति दिएको थियो । त्यसका लागि ३४ करोड ६२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको प्राधिकरण बताउँछ ।
विदेशी सहयोगमा कति सम्पदा निर्माण ?
केही सम्पदा भने विदेशी सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
जसमध्ये विदेशी सहयोगमा ९ वटा सम्पदा काठमाडौं भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्टले बनाएको छ ।
त्यस्तै, अमेरिकी एम्बासडर फन्डबाट हनुमानढोका दरबार परिसरको मोहनकाली चोकको पश्चिमी मोहोडा निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
विभागका अनुसार श्रीलंकन सरकारको सहयोगमा बुङ्मतीको रातो मत्स्येन्द्रनाथको मन्दिरको संरक्षण तथा स्वयम्भूको आनन्दकुटी विहारको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बन्न बाँकी रहेका सम्पदाका लागि बजेट व्यवस्था गर्न प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने,‘बजेटका जटिलता छन्, ‘स्रोत पहिचान गर्छाैं र बजेट के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्छाैं ।’
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त गुम्बाको पुनर्निर्माणका लागि पनि प्राधिकरण प्रतिबद्ध भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए ।
संघीय संसद्का माननीय सदस्यहरू तथा गुम्बासँग सरोकारवाला प्रतिनिधिसँग गुम्बा पुनर्निर्माणबारे छलफल गर्दै उनले सम्बन्धित गुम्बाले बनाएका नक्सालाई मान्यता दिनुपर्ने प्रतिनिधिको मागप्रति सकारात्मक धारणा राखेर नै सरोकारवालाको राय सल्लाहमा सम्पदाको मौलिकता रहने गरी चाडै अन्तिम रूप दिइने बताए ।